Arisiva Nomerika Manampy Amin’ny Fitehirizana Ny Literatiora Aborizinaly Aostralianina · Global Voices teny Malagasy
Arisiva Nomerika Manampy Amin'ny Fitehirizana Ny Literatiora Aborizinaly Aostralianina
Voadika ny 01 Marsa 2016 7:45 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, македонски, Ελληνικά, Deutsch, 日本語, English
Fonom-boky “Bäruwuŋu mala wäŋa bunhawuy” Mpanoratra: Djäwa, Mpandravaka: Yambal, nosoratana amin'ny fiteny Gupapuyŋu avy ao Aostralia hita ao amin'ny Living Archive of Aboriginal Languages.
Ny tantara manaraka dia nivoaka voalohany avy ao amin'ny fanadihadiana tranga ao amin'ny sarintany nomerika angkety [mg] novokarin'ny First Languages Australia. Nahazoana alalana ny famoahana azy eto.
Ny tetikasa Living Archive of Aboriginal Languages [Arisiva Velon'ny fiteny Abôrizinaly] dia nanomboka ny andraikiny hampivelatra ny arisiva natao hanohanana sy hanatsarana ny fampiharana ny fahalalàna ny Abôrizinaly Aostralianina.
Hita ao amin'ny arisiva ny fitaovana efa vita nomerika amin'ny fiteny teratany avy ao amin'ny Northern Territory, izay nifantoka voalohany amin'ny fanangonana votoaty avy amin'ny sekoly manana programam-pianarana amin'ny fiteny roa. Nanana ivontoeram-pamokarana literatiora ireny sekoly ireny, izay namokatra boky amin'ny fiteny nisy tao an-toerana. Nanangona karazan-tantara maro ireo mpampianatra sady mpandalina ny teny sy ireo mpanara-maso ny famokarana fampianarana mamaky teny sy manoratra: endriky ny tantara fahiny ho an'ny ankizy; ny tantara taloha sy taorian'ny fifandraisana tamin'ny vahiny [eoropeanina] ; boky momba ny tontolo iainana, fihazana, raokandro avy amin'ny bozaka, tantara-matoatoa, tantara foronina, tantaran'ny toe-javatra malaza tsaroana, tantara velona, fomba famoronana tantara, ary angano fampitandremana. Nahitana mpamaky, antonta-taratasy filazalazana (curriculum), gazetiboky amin'ny fiteny roa ary gazety tao anatiny. Ahitana tantara avy amin'ny ankizy mpianatra, fokonolona ary zokiolona ao amin'ny fiarahamonina ihany koa.
Sarintany fitadiavana arisiva velona araka ny toerana na fiteny.
Raha mbola misy ny boky sasany any amin'ny fiarahamonina, dia misy kosa ireo boky avy amin'ny loharanom-baovao hafa niparitadritaka ka nangonina indray avy amin'ny tokantranon'olona sy tany amin'ny tahirin'ny tranombokim-bahoaka lehibebe manerana an'i Aostralia. Nomen'ireo mitazona ny zon'ny mpamorona (ohatra: departemantan'ny fanabeazana ao Northern Territory) ihany koa ny alalana hamadika ho nomerika ireo boky avy aminy , ary nokarohina tsirairay ihany koa ireo nandray anjara (na ny fianakaviany ho an'ireo efa maty) hahatonga ny boky ho azon'ny rehetra jerena amin'ny alalan'ny tranonkala.
Ahitana boky avy amin'ny fiteny mihoatra ny 25 avy amin'ny vondrom-piarahamonina maro manerana an'i Northern Territory ankehitriny ny arisiva. Misy fitaovana ara-maso tsara rafitra iray ahafahan'ny mpiserasera miditra maka boky amin'ny alalan'ny sarintany ahafahan-dry zareo mitendry na ny fiteny na ny toerana, ary misy sarin'ny fonomboky aseho hofantenina. Efa vonona ihany koa ny lasitra fikarohana, na araka ny endriny hita amin'ny boky na lahatsoratra feno fotsiny, sy ireo safidin'endriky ny boky hamakiana azy. Voaravaka ny ankamaroan'ny boky ary maro amin'izy ireo no manana dika amin'ny teny anglisy. Ao anatin'ny lalankevitra hitehirizana sy hampahafantarana ny arisiva, dia noforonina nandritra ny famadihana azy ireo ho nomerika ny voatra sy endrika maro isaky ny boky iray. Natao amin'ny endrika PDF ny boky, miaraka amin'ny voatra lahatsoratra fotsiny, raha vonona amin'ny fampihatra kosa ny scan-ny sary voatahiry amin'ny endrika raitra. Ny sasany navoaka ho boky miteny, mampiaraka ny pejy vita pirinty amin'ny vakiny am-bava noraketina vao haingana. Ny fahavononan'ny fitaovana amin'ny endrika samihafa dia mampitombo ny mety ahafahana mampiasa bebe kokoa ireo loharanom-botoaty ireo.
Fonomboky “BE WE 93” mpanoratra: Marrŋanyin, B. Fandravahana: Wadaymu, P., nosoratana tamin'ny fiteny Djambarrpuyŋu avy ao Aostralia hita ao amin'ny arisiva velon'ny fiteny Abôrizinaly.
Mahatonga ny arisiva ho loharanom-baovao hananganana votoaty rahatrizay, ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ny tompon'ny tantara, ny famoahana ireo fitambaran'ny sary sy lahatsoratra ireo. Ahafahan'ny olona mampiasa ireo fitaovana araka ny fomba mety aminy ny arisiva, tahaka ny manavao ny lahatsoratra, manampy sary, na/ary mamorona fomba vaovao ijerena ny votoaty.
Ao anatin'ny takela-boky BE WE 93.
Misy lisansa Creative Commons iray mamela ny fampiasana ireo fitaovana ireo ho tsy azo amidy na ampiasaina amin'ny varotra. Ahitana taratra ny fientanentanana tamin'ny fikarakarana voalohany ny boky—tamin'ny fandraketana, ny fanoratana indray, ny fandravahana, ny fanitsiana, ny fanamboarana, ny fanaovana pirinty, ny fanambatambarana ary ny fanapariahana— ny fomba nanomezana endrika vaovao azy indray. Izay fikatrohana izay sy ny fahafahan'ny fitaovana ao amin'ny arisiva ho azo ampiana, ahitsy, avaozina no mahatonga azy ho velona.
Lanjalanjain'ny arisiva ny mampifaninana ireo fitaovana ireo ho mpisolontenan'ny fahalalana sy ny ahafahan'ny arisiva ho azo ampivoarina, azo roritina ary azo ampiasaina amin'ny fomba maro.
Ny dingana faharoa amin'ny tetikasa dia mampiditra ireo mpisera manoloana ny fitaovan'ny arisiva. Ho fanampiana ny ezaka ‘karohy sy avoty’ amin'ny arisiva anasana ny olona hanampy fitaovana hafa ho ao amin'ny angona sy ho ezaka fampidirana an-tsehatra ny vondrom-piarahamonina handray araka izay mety amin'izy ireo sy hanatsaran'izy ireo ny tahiriny manokana, dia asaina ny sekoly haka fitaovana avy amin'ny arisiva eo amin'ny filazalazana ny mombamomba azy [curriculum]; ary asaina ny mpampianatra amin'ny sekoly ambony manerana an'i Aostralia sy izao tontolo izao hanovo avy amin'ny boky. Mbola eo am-panovana hatrany ny arisiva ahafahana manao izany firotsahana an-tsehatra izany, ho fanatonana ireo mpandray anjara.